YEYINTNGE(CANADA): Saturday, July 13
ကိုကုသိုလ်ဇွန်လ ၇ရက်နေ့ မနက် အောင်ရတနာ ဆေးရုံက်ို အသည်း ရောဂါဖြင့်ဆေးရုံတက်ရ
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/13/20130အကြံပြုခြင်း
Yangon Police's photo.
ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝတ်စုံအားဝတ်ဆင်ပြီး တပ်ဖွဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်း အောင် ပြုလုပ်ခဲ့သူများအားအရေးယူ
၁၃.၇.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၀၉၃၀ အချိန်ခန့်တွင် ရဲမှူးသာဌေး၊ အမှတ်(၆)ဒုတပ်ခွဲမှူး(ရန်ကုန်)၊ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့သည်facebook တွင် ယာဉ်ထိန်းရဲ၏ ကကွက်ဆန်းခေါင်းစဉ်ဖြင့်
ရန်ကုန်မြို့၊ အနော်ရထာလမ်းနှင့် ဆူးလေဘုရားလမ်းဆုံမီးပွိုင့်၌ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝတ်စုံဝတ်ဆင်၍ လမ်းလယ်တွင် ယာဉ်ထိန်းရဲလမ်းရှင်းအချက်ပြနေပုံအား ဒန်ဆာအကဖြင့်
သရုပ်ပျက်ကခုန် လက်ပြနေသည် ကိုတွေ့ရှိရသဖြင့်စုံစမ်းရာ
အဆိုပါသူမှာ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမဟုတ်ဘဲ သရုပ်ဆောင် မင်းမင်းထွန်းဆိုသူဖြစ်ပြီး (Mango)ကုမ္မဏီ၏ ဗီတာမင်(စီ)ကြော်ငြာအတွက် ဒါရိုက်တာဇော်ကိုကိုမှ စီစဉ်ရိုက်ကူးကြောင်း၊ သရုပ်ဆောင်မင်းမင်းထွန်းဝတ်ဆင်ရိုက်ကူးခဲ့သည့်ယာဉ်ထိန်း
ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀တ်စုံအား ၎င်းတို့အစီအစဉ်ဖြင့် မင်္ဂလာဒုံဈေးမှ ချုပ်လုပ်ဝယ်ယူခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိခဲ့ရသဖြင့် ယာဉ်ထိန်းရဲ တပ်ဖွဲ့ဝတ်စုံအားခွင့်ပြုချက်တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲယာဉ်ထိန်း
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးအဖြစ် အယောင်ဆောင်ဝတ်ဆင်အသုံးပြုခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိ လူအများ စည်ကားရာနေရာတွင် ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့၏ ဂုဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်း ကျဆင်းအောင်
ရည်ရွယ်ကာ ပူးပေါင်းပြုမူဆောင်ရွက်ခဲ့ကြ သူများဖြစ်သည့် (Mango)ကုမ္ပဏီမှ အထွေထွေမန်နေဂျာ ဒေါ်ခင်သက်ခိုင်၊ ဒါရိုက်တာဇော်ကိုကိုနှင့် သရုပ်ဆောင် မင်းမင်းထွန်းတို့အား အရေးယူပေးပါရန် ရဲမှူးသာဌေးမှ တိုင်တန်းခဲ့၍ ကျောက်တံတား ရဲစခန်း(ပ)၂၄၄/၂၀၁၃၊ ပုဒ်မ ၁၇၁/၅၀၀/၁၁၄ ဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။
နစက တာဝန်ကို လုံထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ ယနေ့ဇူလိုင် ၁၃ ရက်မှ စတင်ကာ အစားထိုး ၀င်ရောက်
နစက ဖျက်သိမ်းခြင်းအတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လုံခြုံရေးအင်အား လျော့သွားမည် မဟုတ်ကြောင်းနှင့် နစက တာဝန်ကို လုံထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ ယနေ့ဇူလိုင် ၁၃ ရက်မှ စတင်ကာ အစားထိုး ၀င်ရောက်တာဝန်ယူ ထမ်းဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နယ်စပ်ဒေသ လူဝင်မှု စစ်ဆေးရေး ကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် (နစက)အား ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁၂ ရက်မှစ၍ ဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးက ဇူလိုင် ၁၂ တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ နယ်စပ်ဒေသတွင် နယ်စပ်လုံခြုံရေးအတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော နစကအဖွဲ့တွင် အင်အားထောင်ချီ ရှိနေခဲ့ပြီး ယခုအခါတွင် ဖျက်သိမ်းလိုက်သည့်တိုင် အဆိုပါ နစက တာဝန်များအား လုံထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ အစားထိုးဝင်ရောက် တာဝန်ယူမည်ဖြစ်သဖြင့် နစက ကွပ်ကဲရေးမှူး၏ တာဝန်ကို ယနေ့လွှဲပြောင်း ရယူနေပြီ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
နစက ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး "နစက ကွပ်ကဲရေးမှူးရေး တာဝန်ကို လောလောဆယ်မှာ လုံထိန်းရဲ တပ်ရင်းစု ကွပ်ကဲရေးမှူး ရဲမှူးကြီးဗိုလ်ဗိုလ်ဦးက လက်ခံထား ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ဒီနေ့ကစပြီး လက်ခံဆောင်ရွက်ဖို့ ရှိပါတယ်" ဟု ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ရေး ဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ် ဦးလှသိန်းက ဇူလိုင် ၁၃ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီခွဲတွင် ပြောကြားသည်။
သို့ရာတွင် မောင်တောဒေသ လက်ရှိအခြေအနေမှာ တည်ငြိမ်နေပြီး ယခင်နစက စခန်းများတွင်လည်း ပုံမှန်အနေအထားသာ ရှိနေသေးကြောင်း၊ မည်သည့်အဖွဲ့မှ အစားထိုး နေရာယူနေခြင်း မရှိသေးကြောင်းလည်း သိရသည်။
ယင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ယခင်နစက ဒုတိယကွပ်ကဲရေးမှူး တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ထူးလှိုင်က "နစကအဖွဲ့ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီလို့ မနေ့က ည ၈ နာရီ သတင်းမှာ သိရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အခုတော့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း နိုင်ငံတော်ရဲ့ အစီအမံအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် စည်ပင်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်နေဆဲ ဖြစ်တယ်။ ဘာမှစိုးရိမ်စရာ မရှိဘူး။ နိုင်ငံတော်ကလည်း နယ်စပ်လုံခြုံရေးအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ စနစ်ကို စီစဉ်နေတာ ဖြစ်တယ်" ဟု ဇူလိုင် ၁၃ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ပြောကြားသည်။
နယ်စပ်ဒေသ လူဝင်မှုစစ်ဆေးရေး ကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်ကို ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါ နစကအဖွဲ့တွင် တပ်မတော်၊ ရဲ၊ အကောက်ခွန်၊ လ၀က ၀န်ထမ်းများဖြင့် ပေါင်းစည်းကာ နယ်စပ်လုံခြုံရေးအတွက် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါ နစက တာဝန်ယူနေချိန်တွင် တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ တရားမ၀င် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ၀င်ရောက်လာသူများ ရှိနေခဲ့ပြီး လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများ ရှိနေခဲ့သည်ဟု ဒေသခံများက ယူဆခံထားရသည့် အဖွဲ့အစည်းလည်း ဖြစ်သည်။ ယင်းအပြင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန် ၈ ရက်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော မောင်တောမြို့နယ်အတွင်း တိုင်းရင်းသား ကျေးရွာများအား ဘင်္ဂါလီများက အုပ်စုဖွဲ့ အကြမ်းဖက် လူသတ်၊ မီးရှို့၊ လုယက်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့စဉ် နစကမှ အချိန်မီ တာဝန်ယူ ထိန်းသိမ်းပေးခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့သည့်အတွက် နစကအပေါ် မယုံကြည်မှုများ ကြီးထွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်တွင် မသင်္ကာဖွယ်ပစ္စည်းများဖြင့်ဖမ်းဆီးထားသည့် မန္တလေးတိုင်း၊ ၀မ်းတွင်းမြို့နေထိုင်သူမှာ ဆိုင်ကယ်ပြင်စားသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီးရန်ကုန်သို့ အလုပ်လုပ်ရန်
လာရောက်သူတစ်ဦးဖြစ်ကာ ဘုရားဝင်ဖူးစဉ် အဖမ်းခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဓာတ်ခဲသုံးလုံးတပ် မီးတန်းတစ်ခုမှာ ညဖက်ဆိုင်ကယ်ပြင်ရာတွင် မီးထွန်းသည့်ပစ္စည်းဖြစ်။
၇ လက်မခန့်ဓားမှာ ဆိုင်ကယ်ကလပ်အုံ၊ ဂတ်စကက်၊ ဘလောက်တုံးခွာသည့်နေရာတွင်သုံး။
သံဖြတ်လွှအကျိုးမှာ ဆိုင်ကယ်အင်ဂျင်ဘားမှ ဂျီးများခြစ်ရန်အတွက်ဖြစ်။
မော်တာကွိုင်တစ်လုံးမှာ ဆိုင်ကယ်ပြင်သူများတွင် မရှိလျှင် တပ်ပေးရန်ထားခြင်းဖြစ်။
၈x၁၀ ဂွမှာ ဆိုင်ကယ်ဂတ်စကက်နတ် ဖြုတ်ရာတွင်သုံးခြင်းဖြစ်။
ကျွတ်ခေါင်းတစ်ခုမှာ ဘီလေထိုးရာတွင် သုံးခြင်းဖြစ်။
လွန်ခဲ့သော ကိုးလခန့်က တရုတ်ပြည်နယ်စပ်သို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူ အစ်ကို လှဝင်းမှာ အဖွားနေသည့် မကျီးအုပ်ကျေးရွာသို့တစ်ခေါက်ပြန်လာ၍
နိုင်ငံခြားငွေအချို့ကို ပေးသွားခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါနိုင်ငံခြားငွေအချို့ကို အဖွား
ဖြစ်သူက ဘုရားပန်းအိုးအောက် သိမ်းဆည်းထားသည်ကို တွေ့ရှိသဖြင့် ယူဆောင်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း။
အမျိုးသမီးအရေးလှုပ်ရှားသူ"မာလာလာ"ရဲ့ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ မိန့်ခွန်း
ပါကစ္စတန်က အမျိုးသမီးအရေးလှုပ်ရှားသူ ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေး"မာလာလာ ယူဆွပ်(ဖ)ဇိုင်း"Malala Yousafzai ရဲ့ အသက် ၁၆ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ကို မွေးနေ့ ပါတီ မကျင်းပဘဲ ကလေးအားလုံး အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးငယ်တွေ အားလုံး ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ပညာသင်ကြားခွင့်ရရေး ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ ဦးဆောင်လှုပ်ရှားမှုမှာ သူမအနေနဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်သွားမယ့်အကြောင်း ကတိပြုရင်း မွေးနေ့ကိုဆင်နွှဲသွားပါတယ်။
Malala Yousafzai ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၉ လက ကျောင်းကနေ အိမ်ကိုအပြန် လမ်းမှာ တာလီဘန် သေနတ်သမားတွေရဲ့ပစ်ခတ်မှုနဲ့ ခေါင်းမှာ ဒဏ်ရာ ရခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာ မိန်းကလေးငယ်တွေ ပညာသင်ကြားခွင်ရရေး လှုပ်ရှားတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အတွက် တာလီဘန်တွေရဲ့ ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုကို ခံခဲ့ရတာပါ။
မာလာလာရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ မနေ့က သောကြာနေ့ကို “မာလာလာနေ့” အဖြစ် ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က ကြေညာခဲ့သလို ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံမှာ ပုံမှန်အားဖြင့် အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းအတွက် သီးသန့်ထားတဲ့ထိုင်ခုံမှာ Malala Yousafzai က ထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ခုလို မာလာလာနေ့ သတ်မှတ်မှုဟာ သူ့တယောက်တည်းကို ဂုဏ်ပြုတာ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတိုင်း၊ မိန်းကလေးငယ် ယောက်ျားငယ်တွေတိုင်း ကို ဂုဏ်ပြုတာဖြစ်တယ်လို့ မာလာလာက ပြောသွားပါတယ်။
နယူးယောက်မြို့ ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာ လူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေကို မာလာလာက မိန့်ခွန်းပြောခဲ့တာပါ။ ပညာရေးသာလျင် ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ တခုတည်းသော အရာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပြီး စာအုပ်တအုပ်နဲ့ ခဲတံတချောင်းကနေ ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲအောင် လုပ်နိုင်တယ်လို့ မာလာလာက ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ (Via VOA)
ယွန်းဝတီလွင်မိုးနဲ့ ယူနတီဂျာနယ် ကိစ္စ
နန္ဒာအောင် | Wednesday, 10 July 2013
[ယွန်းဝတီလွင်မိုးနဲ့ ယူနတီဂျာနယ် ကိစ္စ ပြေလည်သွားပြီ]
ဓာတ်ပုံမော်ဒယ် တစ်ဦးဖြစ်သလို သရုပ်ဆောင် လွင်မိုးရဲ့ သမီးကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုး
အကြောင်းကို ပြီးခဲ့တဲ့လက ယူနတီ(unity) ဂျာနယ်ကနေ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ သတင်းဟာ လူအများကြား
မှာ တော်တော်လေး ဂယက်ထခဲ့တဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့ထုတ် ယူနတီဂျာနယ်က မျက်နှာဖုံးမှာ 'ယွန်းဝတီလွင်မိုးကို ခိုးပြေးသည်ဟု
သတင်းထွက်ပေါ်'လို့ဖော်ပြခဲ့ပြီး အတွင်းစာမျက်နှာမှာတော့ 'ယွန်းဝတီလွင်မိုးအား ခိုးပြေးသည်ဟု
သတင်းထွက်ပေါ်မှု ကောလာဟလသာဖြစ်' လို့ ဖော်ပြထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဆောင်းပါးမှာ စာရေးသူ ကိုသာမိုးကြည်အောင်က ယွန်းဝတီကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း သန်းရွှေရဲ့
မြေးဖြစ်သူ နေရွှေသွေးအောင် (ခ) ဖိုးလပြည့်က ခိုးပြေးခဲ့တယ်လို့ လူအများကြား ကောလာဟလ
သတင်း ထွက်ပေါ်နေတဲ့အပေါ် မဟုတ်မှန်ကြောင်း ယွန်းဝတီရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ (ဦး)လွင်မိုးကို
ဂျာနယ်မျက်နှာဖုံး သတင်းစာသားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကာယကံရှင်များဘက်မှ နားလည်မှုလွဲမှားခြင်း
သာဖြစ်တယ်လို့ ဂျာနယ်သတင်း ထောက်ချုပ်လည်း ဖြစ်တဲ့ ကိုသာမိုးကြည်အောင်က
အတွင်းစာမျက်နှာ(၃)မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ သတင်းရော၊ ခေါင်းစဉ်ကိုပါ သူကိုယ်တိုင် ရေးသားခဲ့တာ
ဖြစ်ပေမယ့် မျက်နှာဖုံးမှာ ပါသွားတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ တာဝန်ခံအယ်ဒီတာတွေနဲ့ စာမျက်နှာထိုင်
တဲ့သူတွေ လုပ်ကြတာပါလို့ ပြောပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ စာနယ်ဇင်းသမားတွေ အကုန်လုံးက တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အမှီသဟဲ လုပ်နေကြ
တာကြောင့် သူလုပ်တယ် ကိုယ်လုပ်တယ် လွှဲချလို့မရဘူးလို့လည်း ဆိုပါတယ်။
"ဒေါ်မေသူတို့ အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို နားလည်မှုလွဲမှားသွားတဲ့ သဘောပါ။
အဲဒီအတွက်လည်း ဒီကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေက တောင်းပန်ပြီးတော့ ဂျာနယ်မှာပါ ပြန်ထည့်ပြီးသွား
ပါပြီ"လို့လည်း ကိုသာမိုးကြည်အောင်က ပြောပါတယ်။
"အဲဒီသတင်းကို အနုပညာအသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ လုပ်ငန်းကြီးကုမ္ပဏီတွေကနေ ဟုတ်လား၊ မဟုတ်လား
လို့ ကျွန်တော့်ကို မေးကြတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း အရင်ဆုံး ကိုလွင်မိုး ကိုဆက်သွယ်ပြီး
မေးခဲ့တယ်။ ဖိုးလပြည့်ရဲ့ ပတ်သက်ရာ ပတ်သက်ကြောင်းတွေကနေ တစ်ဆင့် စုံစမ်းခဲ့တယ်။
ပြီးတော့မှ ကောလာဟလဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့သတင်းကို ရေးခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ရေးတဲ့ သတင်း
အဓိပ္ပာယ် အပြည့်အစုံက ကောလာဟလဖြစ်နေတာကို မီဒီယာအနေနဲ့ အသိပေးချင်တဲ့ သဘော
"ကျွန်တော့်အရေးအသားထဲမှာတော့ ကာယကံရှင်ကိုရော၊ သူ့ရဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းကိုပါ ထိခိုက်နစ်နာ
စေမယ့် ဘယ်လိုအသုံးအနှုန်းမျိုးကိုမှ သုံးမထားပါဘူး။ ယွန်းဝတီ ဆိုတာကလည်း အနုပညာ
လောကမှာ နေရာရနေတဲ့သူ၊ ဖိုးလပြည့်ဆိုတာကလည်း ဒီမှာ မသိမရှိတဲ့သူ တစ်ယောက်မို့
လူပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိသွားအောင်လို့ ဒီသတင်းကို ရေးလိုက်တာပါ"လို့လည်း
ယွန်းဝတီရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်မေသူ က ယူနတီဂျာနယ်တိုက်ကို ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှာ
ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပြီး အမှားပြင်ဆင်ပေးဖို့အတွက် တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အပြင် တရားစွဲဆိုသွားမယ်
ဆိုတဲ့ အကြောင်းကြားစာကိုလည်း ပေးပိုခဲ့တယ်လို့ ပြောပြပါတယ်။
"အနုပညာရှင်မှန်ရင် ကောလာဟလနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာပဲဆိုတာတော့ မှန်ပါတယ်။ အခုက အတွင်း
စာမျက်နှာမှာက တစ်မျိုး၊ မျက်နှာဖုံးမှာက ကောလာဟလပါဆိုတာ မပါလာတော့ ကျွန်မတို့သမီး
အနေနဲ့ မကောင်းပါဘူး။ သမီးက အခုမှ အသက် ၁၄ နှစ်ပဲ ရှိသေးတယ်။ မိဘအုပ်ထိန်းမှု
အောက်မှာ မိဘနဲ့ ရင်အုပ်မကွာ နေနေတဲ့ လိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့ ကလေးပါ။ အသက်မပြည့်သေးတဲ့
ကလေးကို ဒီလိုမျိုး ခေါင်းစဉ်တပ်လို့ မရဘူးလေ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကလေးသူငယ်ဥပဒေအရ
ရော၊ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောင်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကြောင့်ပါ လုပ်ခွင့်
မရှိပါဘူး"လို့ ဒေါ်မေသူက မြန်မာတိုင်း(မ်)ကို ပြောပါတယ်။
"တကယ်လို့ ကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ အမှုအခင်း ကျူးလွန်တယ်ဆိုရင်တောင် အဲဒီကလေးရဲ့
နာမည်၊ မိဘနာမည်တို့ကို သုံးခွင့်မရှိဘူးလို့ နားလည်ထားတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးသုံးတဲ့အတွက်
စာနယ်ဇင်း ဥပဒေနဲ့လည်း မညီညွတ်ဘူး။ ကလေးဆိုတာ အနာဂတ်ရှိတယ်၊ အသိုင်းအ၀ိုင်းဆိုတာ
ရှိတယ်။ အဲဒါကို မျက်နှာဖုံးစာမျက်နှာမှာ သုံးလိုက်တဲ့ စာသားက တစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။
သူတို့ဘက်က တောင်းပန်လိုက်လို့ပါ။ မတောင်းပန်ဘူးဆိုရင်တော့ တရားဥပဒေအရ ဖြေရှင်းသွား
ကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုးကတော့ သူမရဲ့ ကောလာဟလ သတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့
ပြောကြားထားတာကို "ကောလာဟလဆိုတာကတော့ ပြန့်နေမှာပဲလေ။ အကုန်လုံး လိုက်ယုံနေ
မယ်ဆိုရင် ပြီးတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ကောလာဟလတွေကို မယုံကြပါနဲ့"လို့ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှာ
ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ Now! ဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
မေမြို့မှာ သင်္ကြန် ကျသွား တဲ့ သက်ဆင်
ဦးတေဇ ပိုင် တဲ့ မေမြို့က ကိုလိုနီ ခောတ် အဆောက် အဦ: တစ်ခု(Governor House) မှာ မြန်မာ ကာကွယ် ရေး ဦးစီးချုပ်
ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နဲ့တွေ့ ဆုံ ပြီးသင်္ကြန် အတူ ရေကစား ခဲ့ တယ် လို့ထိုင်း အစိုးရ ၀န်ကြီး ချုပ် ဟောင်း
သက် ဆင် ရှင်နာဝတ်ထရာ က သူ့ရဲ့Facebook စာမျက် နှာ မှာ ရေးသားထား ပါတယ်။
ဆွန် ခရန် သင်္ကြန် ပွဲ တော် ကို မြန်မာ ပြည်မှာ ကျ နိုင် ဖို့သူဟာ တရုတ် ပြည် က နေ တစ်ဆင့် ကိုယ် ပိုင် လေယာဉ် နဲ့ 
လာ ရောက် ခဲ့ တာ ဖြစ် ပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ အဖွဲ စတင် အာဏာရရှိ ချိန် က တည်း ကဆို ရင်မြန်မာ ပြည် ကို
သုံး ကြိမ် မြောက် လာ ရောက် တာ ဖြစ် ပြီး ပထမ ဦးဆုံးအကြိမ် မှာ ဗိုလ် ချုပ် မှုး ကြီး သန်းရွှေ နဲ့ပါ တွေ့ ဆုံ ခဲ့ ပါတယ်။
Photo. Credit to Thaksin Shinawatra
Jul 13, 2013 4:09am
မနက်၉ခွဲလောက် ဆူးလေပွိုင့်မှာဖျော်ဖြေသွားတဲ့ယာဉ်ထိန်းရဲ ရဲ့ကကွက်ဆန်းလေး
Credits : Yan Hmue Aung
ယာဉ်ထိမ်းရဲ အက ကဖို့ ယာဉ်ထိမ်းရဲ အစစ်က လမ်းရှင်းဖို့ စောင့်ကြည့်ပေးနေတယ်..ပုံ ညာဘက်ခြမ်းမှာ.. သူလည်း ကချင်ပုံရတယ် ငေးလို့ ..
ပါကစ္စတန် ကျောင်းသူ ကုလမှာ မိန့်ခွန်းပြော
12 ဇူလိုင်လ 2013 - 23:04 GMT
ပါကစ္စတန်မှာ တာလီဘန်တွေရဲ့ ပစ်ခတ်မှု ခံခဲ့ရတဲ့ ပါကစ္စတန် ကျောင်းသူလေး မာလာလာ ယူဆွပ်ဖ်ဇေး ၁၆ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ မှာ ကုလ သမဂ္ဂမှာ မိန့်ခွန်းပြော ခဲ့ပါတယ်။ခါတိုင်း သံတမန်တွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ရုံးချုပ် ဟာ မနေ့ကတော့ ကမ္ဘာတဝှမ်းက အသက် ၁၂ နှစ်နဲ့ ၂၅ နှစ်ကြား လူငယ် ၅ဝဝ လောက်နဲ့ ပြည့်နှက်နေ ခဲ့ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ စကားပြော စင်မြင့်ကို သူတက်လာချိန်မှာ လူတွေက အကြီးအကျယ် သြဘာ ပေးခဲ့ကြပါတယ်။အစွန်းရောက် တွေဟာ စာအုပ်နဲ့ ဖေါင်တိန်ကို ကြောက်ကြတယ်၊ ပညာရေးရဲ့ သြဇာကို သူတို့ ကြောက်ကြတယ်။ အမျိုးသမီး တွေကို သူတို့ ကြောက်ကြတယ်၊ အမျိုးသမီး တွေရဲ့ အသံ ကို သူတို့ ကြောက်ကြ တယ်။ ဒါကြောင့် လောလောဆယ် Qutta ကွက်တာမှာ အပြစ်မဲ့ ကျောင်းသား ၁၄ ယောက်ကို သူတို့ သတ်ခဲ့ ကြတာလို့ Malala က ပြောခဲ့ ပါတယ်။မာလာလာဟာ ခံစားမှု အပြည့် နဲ့ အားနဲ့ မာန်နဲ့ ဒီလိုပြောခဲ့ချိန်မှာ လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ် ခံခဲ့ရတဲ့ ပါကစ္စတန် ခေါင်းဆောင် ဘနာဇီယာ ဘူတိုရဲ့ ပန်းရောင် ပုဝါကို ခြုံထား ခဲ့တာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ်က ဆိုရင် သူဒီလို ကုလသမဂ္ဂမှာ စကားပြောဖို့ ဆိုတာကို စိတ်ကူးတောင် ယဉ်ခဲ့မိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ပါကစ္စတန် အနောက်မြောက်ပိုင်း ဆွတ် Swat Valley တောင်ကြားမှာ မနှစ် အောက်တိုဘာက သူစီးလာတဲ့ ဘတ်စကားကို တာလီဘန်တွေ ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ ခေါင်းမှာ ဒဏ်ရာ ရခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသမီး တွေရဲ့ အခွင့်အရေး အတွက် လှုပ်ရှား နေတာကို တာလီဘန် တွေက မကြိုက်လို့ တမင် သူစီးလာတဲ့ ကားကို တိုက်ခိုက် ခဲ့တာပါ။ဒီလို ဒဏ်ရာရခဲ့ ပြီးနောက် မနေ့က ကုလသမဂ္ဂမှာ ပထမဆုံး လူထုရှေ့ စကား ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။တကမ္ဘာလုံး အနေနဲ့ စာမတတ်မှု ပပျောက်ရေး ဆင်းရဲ နွမ်းပါးမှု နဲ့ အကြမ်းဖက် ဝါဒ တိုက်ဖျက်ရေး ကြိုးစား လုပ်ဆောင် ကြပါစို့ ၊ စာအုပ်တွေ ဖေါင်တိန်တွေ ကိုင်ကြပါစို့ ၊ ဒါတွေဟာ အင်အား အကောင်းဆုံး လက်နက် တွေပါ။ ကလေး တယောက် ဆရာတဦး နဲ့ စာအုပ် တအုပ်ဟာ ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲ ပစ်နိုင် ပါတယ်။ ပညာရေးဟာ တခု တည်းသော အဖြေပါ၊ ပညာရေးဟာ ပထမပါလို့ အားနဲ့ မာန်နဲ့ ပြောသွား ခဲ့ပါတယ်။သူ့ကို တာလီဘန်တွေက နှုတ်ပိတ်ဖို့ ကြိုးစား ခဲ့ပေမယ့် မအောင်မြင် ခဲ့ဘူးလို့ ပြောခဲ့ ပါတယ်။မာလာလာဟာ အမျိုးသမီး တွေရဲ့ ပညာရေး ကိစ္စကို တကမ္ဘာလုံး အာရုံစိုက် လာအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ အမျိုးသမီးငယ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ဟာ မူလတန်း ပညာကို ပြီးမြောက်အောင် မသင်နိုင်ခဲ့ ကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂ အတွင်း ရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း ကလဲ ဒီအခမ်းအနားမှာ စကား ပြောခဲ့ပြီး မာလာလာဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ သူရဲကောင်းလို့ ခေါ်ဝေါ် ခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေ ပညာသင်ခွင့် လှုပ်ရှားသူ မာလာလာ
ယုံကြည်ချက်အကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားခဲ့သူ ကိုဝေဖြိုးအောင်
ကိုကုသိုလ်ဇွန်လ ၇ရက်နေ့ မနက် အောင်ရတနာ ဆေးရုံက်ို ...
နစက တာဝန်ကို လုံထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ ယနေ့ဇူလိုင် ၁၃ ရက...